Itoobiya Oo Sharuud Adag Ku Xidhay Wada-hadal Ay La Yeelato SUUDAAN Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Xiisadda – somalilandtoday.com
(SLT-Addis Ababa)-Dowladda Itoobiya ayaa mar kale ku celisay in Suudan ay kusoo xad-gudubtay dhulkeeda, iyadoo shuruud uga dhigtay wada-hadal ay la gasho Sudan inay dib uga laabato dhulalka lagu muransan yahay ee ay ciidammadeedu joogeen tan iyo dabayaaqadii sannadkii hore.
Afhayeenka Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, Dina Mufti oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wada xaajood kasta oo laga galayo xiisada kala dhaxeysa Suudan ay ka horreyso inay ciidammadeeda la baxdo.
Afhayeenka ayaa xusay in ayna Itoobiya diidaneyn in wada-hadal la gasho Suudan, balse ay rabto inay dib uga laabato dhulkeeda oo ay ku soo xad-gudubtay, sida uu hadalka u dhigay.
“Itoobiya waxaa ka go’an inay xal nabadeed ka gaadho khilaafaadka xuduudaha ee kala dhexeeya Suudaan,” ayuu warbaahinta u sheegay Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya.
Dowladda Itoobiya ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo diblumaasiyadeed oo ay ku rabtay in ciidamada Suudan looga saaro aaga lagu muransan yahay ee Al-Fashqa, mana jirto jawaab kasoo yeedhay hoggaamiyeyaasha millateriga Suudan oo ku aadan baaqa ah “inay ka baxaan dhulkaas”.